Chii chinonzi hupfumi hwakasanganiswa | Economy Finance
Encarni Arcoya | 03/01/2022 20:57 | Yakagadziridzwa ku 03/01/2022 21:35 | General hupfumi
Imwe yeayo ekutanga ehupfumi mazwi aunofanirwa kugona hupfumi hwakasanganiswa. Iyo ihurongwa hwehupfumi umo maviri kana anopfuura masisitimu ehupfumi anobatanidzwa, asi musiyano wakajeka ndewekuti masisitimu aya akasiyana uye anotopesana kune mumwe nemumwe.
Asi, Chii chinonzi hupfumi hwakasanganiswa? Hune hunhu hupi? Ndechei? Ndezvipi zvakanakira nezvayakaipira zvarinopa? Kana uri kushamisika saka yave nguva yekukupa makiyi kuti unzwisise 100%. Uye pazasi iwe une ruzivo rwese rwaunoda kuziva nezvazvo.
1 Chii chinonzi hupfumi hwakasanganiswa
1.1 Ndeapi maitiro ehupfumi hwakasanganiswa?
2 Ndeapi mabasa anoita hupfumi hwakasanganiswa?
Hupfumi hwakasanganiswa hunotsanangurwa sea hurongwa hwehupfumi umo marudzi maviri ehupfumi anogara, kune rimwe divi kambani yakazvimiririra uye, kune imwe, yeruzhinji. Nemamwe mashoko, tiri kutaura nezvehurongwa hunoita kuti makambani ega ega neehurumende agarisane panguva imwe chete, nenzira yekuti, kunyange zvazvo zvichipesana, hurongwa hwehupfumi hunoumbwa navo. Nenzira iyi, ivo vari vaviri vane rusununguko rwakati, kusvikira rwatanga kupindira kune rumwe, hongu.
Muchiitiko ichi, hupfumi hwakasanganiswa inobvumira masangano akazvimirira kuita zvakasununguka, asi sangano rehurumende, iro rinogonawo kuita, panguva imwechete regulator uye corrector. Mune mamwe mazwi, kana hupfumi hwakazvimirira hukaita zvausingafanire, veruzhinji vanogona kuonesa kana kubhadharisa munhu wekutanga kuita zvakadaro.
Ndeapi maitiro ehupfumi hwakasanganiswa?
Iye zvino zvaunoziva zvakawanda nezve hupfumi hwakasanganiswa, inguva yekufunga nezvehunhu hwayo, mazhinji ayo akatokurukurwa. Kuti ujekese zvinhu, unofanirwa kuziva kuti:
Kune masangano ehurumende neakazvimirira oga. Hukama huri pakati pavo hunofanira kuva hwekugara pamwe chete, nenzira yekuti imwe haipo pasina imwe uye zvakasiyana. Mumwe nomumwe wavo anoitei? Zvakanaka, avo vehurumende vari kutungamira kuvaka masangano ekudzivirira, maindasitiri ekutanga, simba ... (nemamwe mazwi, masangano ari kuzoshandiswa nehurumende yega). Muchiitiko chechipiri, maindasitiri anogadzirwa achave ezvigadzirwa uye zvekushandisa, zvekurima, zvipfuyo, chikamu chepamusoro ...
Pane rusununguko rwakati. Kunyange zvazvo zvichinzi kune rusununguko rwakakwana, kana kuti rusununguko rwakakwana, hazvina kunyanyoita sezvaunokwanisa kuti hurumende, kuburikidza neHurumende, inokwanisa kutonga zvimwe zvinhu zvemasangano akazvimiririra, nenzira yekuti ingapindira mazviri. .
Kune kuvepo kweiyo pfuma yega. Chokwadika, kusati kwave nekugovewa kwakaenzana, zvose zviri zviviri mari neupfumi. Mune mamwe mazwi, zvinotarisirwa kuti munhu wese awane mabhenefiti akafanana, mari kana kugona kuve nechinhu chakavanzika.
Kugarisana kwepurofiti uye kugara zvakanaka kwevanhu. Mune hupfumi hwakasanganiswa iwe uchakwanisa kuona hurongwa hunobva pane purofiti, ndiko kuti, pakushanda kuti uwane rubatsiro rwehupfumi). Zvisinei, iwe unogonawo kuwana hutano hwemagariro evanhu, kureva, hurongwa umo hupenyu huri nani hunosimudzirwa.
Deredza kusaenzana kwehupfumi. Uyo ane chinangwa chisiri chimwe kunze kwekuderedza mukaha uripo pakati pevapfumi nevarombo. Kureva kuti, gadzira huwandu hwevanhu "vasina maturo" pane kunyanyisa.
Ndeapi mabasa anoita hupfumi hwakasanganiswa?
Sezvauri kuona, hupfumi hwakasanganiswa hunogona kuva hurongwa hunoshanda. Kutaura zvazviri, hchero nyika dzazvinoshanda, senge United Kingdom kana China (zvisinei nekuti pano kakawanda yave ichionekwa sehupfumi hwemagariro evanhu).
MuUK, semuenzaniso, hurumende inotarisira chikamu chehutano chenyika, ichipa kuvharwa, kushandira vanachiremba nezvipatara, nezvimwe. Kune chikamu chavo, maindasitiri epachivande ndeaya anobata nezvinhu zvevatengi.
Uye chimwe chinhu chakafanana chinoitika muChina, kunyange zvazvo muenzaniso waro unonzi ndewehupfumi hwemazuva ano hwakavhenganiswa, hune hurumende yepakati uye kutonga kunyange mumakambani anobereka (ezvinhu uye kushandiswa).
Zvese izvi zvinoita kuti tifunge nezve izvo mabasa anoitwa nehupfumi hwakasanganiswa uye izvi ndeizvi:
Hukama hwakanaka pakati pehurumende nevemapato akazvimiririra. Nokuda kweizvi, iHurumende iyo, nekudzikwa kwenhevedzano yemitemo, inotonga nekuita kuti zvikamu zviviri izvi zvishande nemazvo.
Ita sarudzo dzehupfumi zvichienderana nemutemo wekupa uye kudiwa.
Kana pakaitika matambudziko emusika kana kukundikana, iHurumende (Hurumende) yaizoita uye sarudzo yayo inofanira kuteverwa nevose.
Hurumende pachayo ndiyo ine basa rekugadzira zvinhu nemasevhisi. Asi kwete chero, asi izvo zvisingabatsiri kumakambani, akadai sefoni, magetsi, mvura, nezvimwe.
Guarantee shoma kuti urarame. Kureva, kuwana yakaenzana kugovera sisitimu kuitira kuti munhu wese ave nehushoma hwakakwana hwekurarama.
Zviri pachena kuti hupfumi hwakasanganiswa hunogona kuva nezvakanakira zvakawanda kune ese makambani uye neruzhinji chikamu. Asi panguva imwe chete pane downsides.
Kana zvinobatsira, iyo inonyanya kukosha ndeiyi:
Rusununguko kumakambani, sezvo vachigona kubata uye kutonga mabhizinesi avo. Mukuwedzera, izvo zvinovabvumira kuwana mabhenefiti uye mibairo yebasa ravo.
Chokwadi chekuva nerusununguko irworwo uye panguva imwe chete kukwikwidzana, kunoita kuti vagare vachigadzira zvinhu zvitsva vachifarira vatengi, saka vanogara vachiedza kugutsa mutengi.
Kune akasiyana makuru esarudzo, nekuti panogona kunge pasina kambani imwe chete, asi yakati wandei.
Pamusoro pezvo, mihoro inoitirwa kuti ifanane uye inodzorwa kumisika.
Zvino, pakati pe zvipingamupinyi zvisingafaniri kurasika Tine:
Kuda kwekugara uchidzora uye kuenzanisa, chimwe chinhu chisingagoneki nevakawanda. Kwete chete nebazi rehurumende, asiwo nebazi rakazvimirira.
Pane kumwe kusava nechokwadi. Uye chokwadi ndechekuti kuvapo kweHurumende, kunoita kuti vakawanda vaone sekupindira kweizvi uye kuti "rusununguko" runodziviswa nezviito zveizvi.
Kune nhamba huru yemitero uye iyi yakakwirira. Izvi zvinodaro nekuti Hurumende inoisa vimbiso dzayo pamberi.
Zviri kujeka kwauri ikozvino kuti hupfumi hwakasanganiswa chii?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Chii chinonzi hupfumi hwakasanganiswa